कर्मभूमिबाटै माइती देशको चिन्ता « Drishti News – Nepalese News Portal
कर्मभूमिबाटै माइती देशको चिन्ता
२८ चैत्र २०७७, शनिबार ११ : ४१ मा प्रकाशित
म झल्याँस्स ब्यूझिएँ ।
हङकङलाई कर्मभूमि बनाएर अक्षर कर्ममा लागेकी चेली सुनिता गिरीको ‘माइत जाने बाटो’ कवितासङ्ग्रह २०७४ मा नै प्रकाशित भएको रहेछ । र, २०७७ मा दोश्रो संस्करण प्रकाशित भएपछि मात्र मेरो हातमा पर्यो । कविता संग्रह प्रकाशित भएको समाचार त पढेकै थिए । तर, उनको कविता कृति प्राप्त हुन सकेको थिएन, गीतकार तथा मेरा परम मित्र वसन्तराज अज्ञातमार्फत पढ्ने अवसर प्राप्त भयो ।
हुनतः नेपालमा धेरै कविहरु छन्, धेरै कविता लेखिन्छ तर, कविता पढ्ने र कविताका कृति किन्ने व्यक्तिहरु कमै देखिन्छन्, भनिन्छ । त्यही धेरैबाट सार निस्कने हो, जसरी थोरै घिउ निकाल्न ठेकीभरी दही चाहिन्छ । त्यसकारण हामी जति धेरै साहित्य कर्ममा लागेकाछौं, त्यति नै उम्दा साहित्य सिर्जना हुन्छ भन्नेमा ढुक्क छौं । त्यसकारण सिर्जनाहरु धेरै नै लेखिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । प्रसंग ‘माइत जाने बाटो’कै हो ।
यही कृतिको आधार टेकेर नै मैले यी कुराहरु गर्न सकेको हुँ । कविताका किताबहरु नबिक्ने र नपढिने भन्नेहरुको लागि ‘माइत जाने बाटो’को दोश्रो संस्करण गतिलो झापड पनि हुन सक्छ । कवितै नबिक्ने भए कसरी प्रकाशकले दोश्रो संस्करण निकाल्छ त ? हो यसको जवाफ खोज्नको लागि पनि ‘माइत जाने बाटो’का कविताहरु पढ्नुपर्ने सुझाव दिन चाहन्छु ।
हुनतः मैले सुनिता गिरीलाई भेटेको छैन, नभेटेपछि चिनजान कसरी हुनु र ? तैपनि उनको कृति पढिरहँदा मलाई उनी वर्षौदेखि परिचित आफ्नै चेली जस्तो लागि रहेछ । परिस्थितिले कर्मभूमि हङकङमा आफ्नो कर्मका बिजहरु उमारीरहेकी उनी अक्षरहरुमार्फत आफु र आफ्नो परिवार कुशल रहेको समाचार सम्प्रेषण गरिरहेकी छिन्, माइतीलाई । यो हामी माइतीहरुको लागि खुशीको कुरा हो ।
हामी हाम्री चेली जहाँ रहेपनि खुशी देख्न चाहन्छौं, हाम्री चेलीको खुसी हाम्रो खुसी हो । र, नेपाली कवितामा उनको उपस्थिति हाम्रो लागि पनि खुसीको कुरा हो ।
समग्र मानवीय संवेदनाहरू चित्रण गरिएका कविता संधैँ उत्कृष्ट ठहरिन्छ । सुनिताका कविताहरू यही कोटीमा पर्दछन् । उनका कवितामा मानवीय पक्षहरु थुप्रै भेटिन्छन् ।
आधुनिक सभ्यताको नमुना सहर हङकङमा रहेर पनि आफ्नो संस्कृति, नेपालीपन र नेपाली भाषासाहित्यमा तनमनका साथ लागि परेकी सुनिताका यी कविताहरु प्रवासका आँसुका भेल नभएर समग्र मानव समुदायका चेतनाका झिल्काहरुको रुपमा लिन सकिन्छ ।
प्रवासलाई कर्म भूमि बनाएर धेरै स्रष्टाहरुले सिर्जना गरेका देखिन्छ । यसैक्रममा सुनिताको काव्यिक यात्राले दोश्रो संस्करणसम्मको यात्रा गर्नु उनको कविता शक्तिले नै हो । उनका कविताहरु सरलतामा कलात्मक रहेका छन्, सलल वगेका कञ्चन नदी जस्तै । जसरी नदीमा विभिन्न जीवजन्तुहरु निस्फिक्री पौडीरहेका दृष्यहरु हेर्दा हामीलाई रमाइलो लाग्छ, उनीहरुको संंसार देख्दा हामी रमाउँछौ ।
जीवहरुको त्यो अलग संसारको अस्तित्वसंग जीवहरु अनविज्ञ छन् । हामी पनि हाम्रो अस्तित्वप्रति अनविज्ञ नै छौ । तथापि, हामी हाम्रो जीवनको उद्देश्यप्रति स्पष्ट छौँ । हो, सुनिताका कविताहरुको उद्देश्य पनि स्पष्ट रुपमा हामीले देख्न सक्छौं । मानवीय मूल्यको पक्षमा उभिएका यी कविताहरु मानव जीवन र जगतलाई हेर्ने आँखिझ्यालभन्दा पनि हुन्छन् । उनी यस कविता यात्रामा स्पष्ट छिन । र, अफ्नो अनुभूति यसरी व्यक्त गर्छिन ।
‘कविताको साँघुरो गोरेटो छिचोल्दै यतिखेर म चौबाटोमा आइपुगेकोछु । यहाँसम्म आइपुग्दा साँघुरो भए पनि एउटा मात्रै थियो, बाटो । अब यहाँबाट अघि हिँड्नको लागि प्रशस्त छन्, बाटाहरु । सोचिरहेकी छु, अब कुन बाटो जाने होला ? डराइरहेकी छु ।
कहाँ पुग्छु होला ? मलाई डोर्याउने अबको बाटोले कहाँ पुर्याउँछ होला ? चिन्तासँगै उत्सुकता थपिएको छ, यात्रामा । रहस्यहरुले, प्रश्नहरुले, चुनौति एव्म अवसरहरुले पछ्याउँदो रहेछ, यात्रामा । हो, यसबेला म नहिँडूँभन्दा पनि हिँड्नैपर्ने जस्तो कविता यात्रामा छु । यद्यपि, मैले कविताहरुलाई डोर्याइरहेकी छु कि कविताहरुले मलाई डोर्याइरहे छन् ।
ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ । जे भए पनि संवेदनशील दुर्घटनाहरुमा मलाई हरप्रहर जोगाउने र जीवनको प्रत्येक विरक्तिहरुमा, बिरानीहरुमा प्रेमले सम्झाउने, मलाई सदा नियन्त्रण गर्ने, मेरै प्रछायाँजस्ता यी कविताहरुलाई न म अब त्याग्ननै सक्छु न यी कविताहरुले मलाई बेप्रवाह भुल्न नै सक्दछन् । त्यसैले एक आमाका लागि आफ्ना सन्तानको माया जुन सीमासम्म हुन्छ, एक कविका निम्ति उसका कविताहरुका माया त्यही सीमासम्म हुन्छ । यसकारण यी कविताहरु मेरा सन्तानहरु हुन् ।’
उनका कविताहरुमा प्रकृति प्रेम, मातृत्व प्रेम, नारीप्रतिको स्नेह र उनीहरुको स्वतन्त्रताको कुरा, कर्मभूमिका सौन्दर्यताप्रतिको स्नेह, कर्मभूमिबाटै माइती देशको चिन्ता, देशप्रतिको स्नेह लगायत मानवीय संवेदनाका सामूहिक स्वरहरु प्रज्वलित छन्, ‘माइत जाने बाटो’ संग्रहका कविताहरुमार्फत ।
सरल भाषा तथा सरल विम्बमार्फत गम्भीर उद्घोष गरिएका यी कविताहरु वर्तमानका महत्वपूर्ण दस्तावेजहरु पनि हुन् ।
समयका वाछिटाले हानेका हामीले भोगेको कुरूप समय साथै प्रेम, प्रकृति, राष्ट्रियप्रेम, मानव जगत्का यावत भोगाई कविताका विषय बनेका छन् । सुनिताको कविता प्रस्तुत गर्ने शैली निकै सुन्दर छ । जे जस्तो भोगाई पनि सहने क्षमता राख्न सक्नुपर्छ भन्ने सकारात्मक सोच व्यक्त भएका छन्, उनका कवितामार्फत ।
जे जस्तो ठक्कर पाए पनि हामी हाम्रै समाजका हौं, हामीले सधैं प्रेम गर्नुपर्छ हाम्रो समाजलाई भन्ने चाहना उनको छ । उनले कवितामार्फत यी सन्देशहरू प्रवाहित गर्न खोजेका छन् । उनका कविताहरू सुनौला घामका किरण जस्तै सुन्दर छन् ।
जसरी घामका किरणले आफू दुर्गन्धित नभैकन संसारका दुर्गन्धहरूलाई नाश गर्छन, त्यसरीनै उनका कविताहरूले हाम्रो समाज नै यस्तै छ त के गर्ने ? यसैमा हामी रमाएर समाधान खोज्नु पर्छ भन्ने मूल सन्देश प्रवाहित भएका छन् ।
जीवन र जगत्बारेका चिन्तनहरू कवितामार्फत पोखिएका छन् । उनका कविताहरू पढ्दा लाग्छ, ‘हामीले हाम्रै जीवन पढिरहेका छौं ।’ समाजका हरेक यथार्थलाई टपक्क टिपेर कवितामार्फत प्रस्तुत गर्न खप्पिस छन् ।
समाजमा घटित विकृतिप्रति प्रहार गर्नुको साथै गलत कुराहरूलाई सजग गराई रहेका हुन्छन्, कवितामार्फत । उनी कवितामार्फत उज्यालोको खोजी गर्छन, उन्मुक्तिको कामना गर्छन् । कवितामार्फत समुन्नत जीवनको कामना गरिरहेका हुन्छन् ।
‘कविता अप्ठेरोमा पर्ला अर्कै कुरा भयो । तर यो विधा कहिल्यै एक्लिने छैन । मानिस युद्धमा, भोकमा, अभावमा, त्रासदीमा केही समय कविताबाट बिमुख रहला तर ऊ एक दिन शान्त, उज्यालो र महान् मानवीय गोरेटोमा फर्कन्छ र कवितालाई फेरि अँगाल्छ, प्रेम गर्छ । मेरो विश्वास छ, कविताले लगातार मानवीयकरणको खेलमा भाग लिइरहन्छ । वस्तुमा, भावमा, दृष्टिमा, जीवन भरिरहन्छ र आफ्नो जगत् फेरि निर्माण गर्छ ।’
चर्चित कवि मनु मञ्जिलका यी भनाईहरूले कविता मानव जीवनका अङ्गकै रूपमा रहेको दर्शाउछ । समग्र मानवीय संवेदनाहरू चित्रण गरिएका कविता संधैँ उत्कृष्ट ठहरिन्छ । सुनिताका कविताहरू यही कोटीमा पर्दछन् । उनका कवितामा मानवीय पक्षहरु थुप्रै भेटिन्छन् । सुनिताको काव्ययात्रा अझै चुलिदैँ जानेछ, शुभकामना ।
देशको अलिकति माटो
बोकी ल्याउँला सोचेको थिएँ
काठमाडौं । वैशाख कृष्ण औँसी अर्थात् मातृ सम्मान दिवस एवं आमाको मुख हेर्ने पर्वको अवसर
चिनियाँ लेखकको नेपाली कविता संग्रह प्रकाशित
कहिले पनि जीवन खेर नफाल कहिले पनि मानवताको परीक्षा नलिनू स्वयंलाई प्रेम गर्नू र अरू
मौलिक सिर्जनाबाट मुलुकको प्रतिष्ठा बढाउनुपर्छ : राष्ट्रपति भण्डारी
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विश्वमा विकसित कलाको सिद्धान्त र प्रवृत्तिको अध्ययन गरी मौलिक सिर्जनाका
विश्व नेपाली साहित्य सम्मेलन हुँदै
काठमाडौं । संसारभरका नेपाली भाषा तथा मातृभाषा साहित्यमा कलम चलाउने श्रष्ट्राहरुलाई समेट्दै विश्व नेपाली साहित्य